Ukushaya Ngezibhakela | Martech Zone
NgoMgqibelo, Septhemba 29, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
NgoLwesihlanu, sibe nesikhathi esimnandi neqembu kubaxhasi bethu bezobuchwepheshe,I-Formstack , sixoxa ngesoftware yamabhizinisi amancane nokukhula nempumelelo yawo embonini. Ingxoxo eyodwa ishaye intambo nami futhi ibikhuluma kahleI-Formstack 's rebranding.
Ukunikeza isizinda,I-Formstack yethulwe okokuqala njengeFormspring. Lapho ithimba libona ukuthi ithuluzi labo lidume kanjani ekubuzeni imibuzo, basungula ithuluzi lalokhu futhi baliqamba igama I-Formspring, Bese baphinde baphinde babuye bathuthukisa ithuluzi labo lokuqala I-Formstack. UFomspring uthuthele indlunkulu yakhe eSilicon Valley futhiI-Formstack wasala e-Indianapolis.
Njengomngani ka-Ade nenkampani yakhe, ngikholwa ukuthi ngize ngazwakalisa ukukhathazeka kwami ​​maqondana noshintsho nokuthi lungakuthinta kanjani ukuseshwa. Kepha ushintsho lwenziwe,I-Formstack wayenalo ukwenza uphawu oluqinile kubonga eqenjini kwa-KA + A, nevolumu emangalisayo yabasebenzisi bakaFormspring bebejabule… njengoFormspring owahlangana nabaholi bezinhlelo zokuxhumana nabantu eSilicon Valley. Iqiniso ngukuthi, yize kwakubuhlungu, into enhle kakhulu leyoI-Formstack okwakwenzile kwakuwukushaya nje ngomsindo, ukugxeka nokuqhubeka nokusebenzela amakhasimende abo.
Ekugcineni, kusebenze kahle… uma kungaphelele.I-Formstack iyaqhubeka nokukhula futhi iyaqhubeka nokuhlala ishesha futhi isungula izinto ezintsha - yethula i eyinqolobane ukuhlanganiswa ezinsukwini ezimbalwa ezizayo ezizoqhuma ukukhula kwabo!
Angizazi izingxoxo zangaphakathi ezenzeke ngo-I-Formstack ngaleso sikhathi, kodwa ngiyaqiniseka ukuthi kwakukhona i-mayhem… kanye nesilingo sokubuyela emuva esinqumweni. Njengoba ngisebenza nezinkampani eziningi ngokwengeziwe, noma kunjalo, ngibona isici esivamile ezinkampanini eziphumelelayo. Bona ngena ngesibhakela.
Iqiniso ukuthi kwesinye isikhathi uquqaba alulungile. Futhi isikhathi esiningi, abagxeki banephutha ngokuphelele. Ama-Blogger, izintatheli nabanye abagxeki bangababhali futhi imvamisa abanayo impumelelo yebhizinisi yabo ukuze bafanelekele ukwenza iziphakamiso ngokuthi inkampani kufanele isebenze kanjani. Lapho ngiqala Highbridge, Ngangibuka futhi ngilalela wonke umuntu futhi ibhizinisi lami lalicishe liphele ngokushesha njengoba laqala.
Kwaze kwaba yilapho ngiqala ukukhuluma nabantu ababenerekhodi lokukhulisa amabhizinisi aphumelelayo lapho ngaqala khona ukulandela umbono wami wokuthi ibhizinisi lami kufanele libe yini lapho ibhizinisi lami laphumelela. Imihlangano noChris Baggott, uKristian Andersen, uMat Nettleton, uHarry Howe, uDavid Castor, uTodd Boyman, u-Adam Small, uDoug Theis noMichael Cloran banginikeza ugqozi lokuthi ngidlule ngenqindi. Ngishintshe kakhulu ibhizinisi lami, ngalahlekelwa umngani omuhle ngenxa yalo, futhi ngalalela ukukhononda esifundeni kubikezela ukuphela kwami.
Kepha ngangena ngesibhakela.
Highbridge njengebhizinisi elisemthethweni nje lidlule iminyaka emi-2 futhi manje sinabasebenzi abayi-6 besikhathi esigcwele kanye neqoqo lamakhasimende impela. Sisanda kusayina iRoche emazweni omhlaba, siqedele amaphrojekthi wethu wokuqala kwe-VMware, futhi sinamakhasimende athembeke ngendlela emangalisayo afana no-Angie's List, Zmags, Mindjet, TinderBox, Delivra, Right On Interactive nokuningi. Sinamanye amaklayenti abuyile ngemuva kokuqaliswa ngempumelelo… njengoChaCha, iWebtrends, ne-VA Loan Captain.
Ithimba lethu lincane futhi lihlukahlukene, kepha siyashesha futhi sonke sinolaka ekutholeni imiphumela. UJenn uyingxenye ebalulekile yethimba lethu eligcina konke kuhamba, uStephen udonsa ubusuku bonke nezimangaliso, uMarty ungumthombo wokutholwa futhi uphonsela inselelo amaklayenti ethu, uNikhil unaka imininingwane, noNathan ungumklami we-rock-star ube igama embonini ngolunye usuku. Lonke iqembu lethu linento eyodwa elifana ngalo - siyadlula. Asibalaleli abantu abasuke bephikisana nathi, sihlela indlela yethu. I-ejensi yethu ayifani nezinye futhi idida amanye amaklayenti ethu njengoba engakaze asebenze nenkampani efana neyethu.
Yeka ukulalela uquqaba bese uhlela eyakho indlela. Abantu bazokutshela ukuthi awukwazi ukwenza izinto ongazenza. Impendulo yeklayenti kumikhiqizo nezinsizakalo isiza iklayenti… kepha kungenzeka ingabi senzuzo yenkampani yakho. Amanye amakhasimende azolimaza inkampani yakho futhi udinga ukufunda ukuthi ungawaqeda kanjani. Iningi labantu likhetha indlela ephephile, hhayi eyingozi.
ezokuxhum kungaba yithonya elibi kunazo zonke izinkampani… isixuku asihlakaniphile ngokuphelele, i-groupthink isilinganiso - hhayi okuhlukile. Uma ufisa ukuphumelela, kufanele uyeke ukulandela futhi kufanele uqale ukuhola.
Umkhakha Wokumaketha Komphakathi we-B2B
Sep 29, 2012 ngo-4: 34 PM
Siyabonga ngokwabelana ngale Doug. Kuzwakala ngempela kimi futhi kuyisifundo esihle kungakhathalekile ubukhulu benkampani oyisebenzelayo. Siyakuhalalisela ngomgubho weminyaka emibili futhi!
Sep 29, 2012 ngo-4: 40 PM
Ngiyabonga @jaschakaykaswolff: disqus! Akungabazeki ukuthi kabusha: ibhizinisi lamanje kanye nokumaketha kuyashintsha uMindjet abhekene nakho - anginakungabaza nawe lapho uzohola khona futhi sizoqhubeka nengcindezi engapheli yokukusiza uyenze. Futhi, ngiyabonga ngokuba ugqozi nomlingani oqotho. Usisizile wasikhiphela ezinkomba esidinga ukuya kuzo futhi ube nesandla esikhulu ekukhuleni kwethu okuqhubekayo nempumelelo.
Sep 30, 2012 ngo-12: 12 PM
UDoug, ngiyabonga ngokusivula futhi siyabonga ngokuthunyelwe okulandelayo. Ngingakuqinisekisa ukuthi kwakukhona okuncane kwe- "mayhem" ngalezo zinsuku. Kuyamangaza ukuthi ukuba nohlelo lokusebenza oluqinile, amakhasimende amangalisayo, nobuholi obuhle, kungakusiza kanjani ukuthi uthole amandla okuqhubekela phambili. Ngikujabulele ukukubona ukhula DK New Media futhi angikaze nakanye ngithandabuze izinto ongazenza. Ungumuntu oyedwa ophihliza abasebenzi wedwa, futhi manje njengoba uneqembu angilindele lutho ngaphandle kokulungele nina bafana. Siyakuhalalisela ngokuqhubeka nokukhulisa ibhizinisi lakho.